सर्किट ब्रेकपछि पनि गिरावटमा ब्रेक लागेन
१२ चैत, काठमाण्डौ । साताको पहिलो कारोबार सोमबार पनि शेयर बजार परिसुचक नेप्से ओरालो लागेको छ । सोमबार बजार खुलेदेखि नै लगातार घटेको नेप्से आधी घण्टाको समयमा ३० अंकले घटि सकेको छ । यो अवधिमा बजार १ हजार १ सय ९० दशमलव ४२ को बिन्दुमा आइपुगेको छ । सर्किट ब्रेकपछि खुलेको कारोबार पनि घटि नै […]
खुल्यो राधी विद्युतको शेयर कारोबार
१२ चैत, काठमाण्डौ । राधी विद्युत कम्पनी (Radhi Bidhyut Company) को साधारण शेयरको कारोबार खुल्ला भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले कम्पनीको पहिलो शेयर कारोबारको लागि १ सय ३९ रुपैयाँ ६६ पैसा देखि ३९७ रुपैयाँ ९८ पैसा मूल्य रेञ्ज प्रदान गरेको छ । कम्पनीको ४१ लाख कित्ता शेयर गत आइतबार नेप्सेमा सुचीकृत भएको थियो । कम्पनीको शेयर […]
कैलाश हेलिकप्टरको सेवा सुरू
११ चैत, काठमाण्डौ । कैलाश हेलिकप्टर सर्भिसेज प्रालिले नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट आज वायुयान सञ्चालन अनुमति (एओसी) प्राप्त गरेको छ । एओसी पाएसँगै कम्पनीले चैत १० गते शनिबारदेखि व्यावसायिकरुपमा सेवा प्रदान गर्ने आज विज्ञप्तिमार्फत जनाएको हो । कम्पनीले करिब एक महिनाअघि एयरबस कम्पनीको फ्रान्समा निर्मित हेलिकप्टर ल्याएको थियो । कल साइन -9N-AML भएको यो […]
निक्षेप बढाउन बैंकहरुको अफरै अफर
११ चैत, काठमाण्डौ । लगानीयोग्य रकमको चरम अभाव खेपिरहेका बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरु निक्षेप तान्नका लागि लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्ने बग्रेल्ती सुविधा र अफरहरु सार्वजनिक गर्दै प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । तरलता अभावका कारण कर्जा बिस्तार गर्न नसक्ने अवस्था भएपछि एकले अर्कालाई उछिन्दै नयाँ–नयाँ अफर सार्वजनिक गरिरहेका छन् । केही समयअघि नेपाल बैंकर्स संघ(एनबिए)ले देशका २८ वाणिज्य […]
सनराइज बैंक र खल्तीबीच सम्झौता
९ चैत, काठमाण्डौ । सनराइज बैंक र ‘खल्ती डिजिटल वालेट’बीच मोबाईल भुक्तानीका लागि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सनराइज बैंकका तर्फबाट नायब महाप्रबन्धक रविन नेपाल र खल्तीका तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक मनीष मोदिले बिहिबार उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । सम्झौताअनुसार सनराइज बैंकका ग्राहकहरुले बैंकको मोबाईल बैकिङ्ग सुबिधा प्रयोग गरी “खल्ती”मा सजिलै पैसा लोड गर्न र सोमार्फत […]
पोखरामा बैंकिङ–बीमा एक्पो हुँदै
९ चैत, पोखरा । पोखरामा दुई दिनसम्म चल्ने बैंकिङ एक्स्पोको सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रवद्र्धन एवं मिडिया इन्टरनेसनलको आयोजनामा चल्ने बैंकिङ एक्स्पोको सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको आयोजकले पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको हो । बिहीबार पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैंक, पोखरा शाखाका का.मु. निर्देशक तिलबहादुर गुरुङले प्रदेश […]
८ चैत, काठमाण्डौ । नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तथा सिँचाइ परियोजना कार्यान्वयन गर्न विश्व बैंकले २६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ ऋण सहायता प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । बैंक सञ्चालक कार्यकारी समितिको बुधबारको बैठकले नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन तथा रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ परियोजना (दोस्रो चरण) को आधुनिकीकरणका निम्ति रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको […]
८ चैत, काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंकले “लक्षित मुद्दती–रिकरिङ्ग डिपोजिट” मानिंदै आएको ब्याजदरलाई बढाई १० प्रतिशत ब्याज प्रदान गर्ने भएको छ । लक्ष्मी बैंकको लक्षित मुद्दती खाता जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई लक्षित गरी ल्याइएको बचत योजना रहेको बैंकले जनाएको छ । यो “लक्षित मुद्दती” रिकरिङ्ग डिपोजिटमा ग्राहकहरुले न्यूनतम रु. ५०० देखि जम्मा गर्नसक्ने बैंकले जनाएको छ । ग्राहकले […]
८ चैत, काठमाण्डौ । सुनको भाउ आज तोलामा ५ सय रुपैयाँ बढेको छ । सुन आज तोलाको ५७ हजार ९ सय रुपैयाँमा कारोबार भैरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । महासंघका अनुसार हिजो तोलाको ५७ हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको भाउ आज तोलामा ५ सय रुपैयाँ बढेको हो । यस्तै चाँदी पनि […]
नबिल बैंकको खाता खोल्ने बित्तिकै वर्षभरीकै ब्याज पाइने
८ चैत, काठमाण्डौ । नबिल बैंकले मुद्दति खातामा ११% ब्याज दिने भएको छ । यसअघि साना र मध्यम स्तरका बैंकहरुले ब्याजदर बढाउन होडबाजी गरे पनि नबिल, स्टान्डर्ड चार्टर्ड, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट लगायतका बैंकले मुद्दति निक्षेपमा १०% भन्दा तलै ब्याजदर कायम गरेका थिए । तर अहिले नबिल बैंक समेत उही प्रतिस्पर्धामा उत्रिएपछि बजारमा तरलता अभाव तत्काल समाधान […]
चार कम्पनीको ७३ लाख ७७ हजार कित्ता सेयर सूचीकृत
८ चैत, काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्चेञ्ज (नेप्से)मा बुधबार चार कम्पनीको बोनस र हकप्रद गरि ७३ लाख ७७ हजार ३४२ दशमलव ३३ कित्ता सेयर सूचीकृत भएको छ । रिडी हाइड्रोपावर, मुक्तिनाथ विकास बैंक, वोमी माईक्रोफाइनान्सले बोनस तथा कम्युनिटी डेभलपमेण्ट बैंकले हकप्रद सूचीकरण गराएका हुन् । मुक्तिनाथ विकास बैंकले ४३ लाख १९ हजार ६०५ कित्ता बोनस […]
प्रिमियर इन्सुरेन्सको बोनस समायोजन, कतिमा खुल्यो कारोबार ?
८ चैत, काठमाण्डौ । प्रिमियर इन्सुरेन्सको १३.५२% बोनस सेयरमा भाउ समायोजन भएको छ । बोनस समायोजनपछि प्रिमियरको सेयर भाउ प्रतिकित्ता ८०६ रुपैयाँ कायम भएको छ । बिहीबार प्रिमियरको सेयर कारोबार यही मूल्यलाई आधार मानेर खुलेको छ । यो इन्सुरेन्सको औसत अधार मूल्य भने ८१६ रुपैयाँ छ । यो इन्सुरेन्सले चैत २६ गते बस्ने वार्षिक साधारण सभामा १३.५२% […]
बुधबार पनि बजार घट्ने श्रृखला जारी
७ चैत, काठमाण्डौ । बजार घट्ने श्रृखला जारी रहँदा बुधबार नेप्से सूचक १२३१.०७ विन्दुमा आइपुगिसेको छ । नेप्से बुधबारमात्रै २४.४० अंकले घटेको हो । छोटो समयमा भारीमात्रामा बजारमा सेयर संख्या थपिनु, चर्को बैंक ब्याजदर लगायतका कारण सेयर बजार चेपुवामा परेको हो । सरकारको नीति र कार्यक्रम नआउँदा लगानीकर्ता झन् अन्योलमा परेका देखिन्छन् । बुधबार कुल […]
सपोर्ट माईक्रो फाइनान्स प्रदेश नं. १ र २ मा विस्तार हुने
७ चैत, काठमाण्डौ । सपोर्ट माईक्रो फाइनान्स (SMB) ले आगामी चैत्र २९ गते साधारण सभा गर्ने भएको छ । साधारण सभा दुर्गा पार्टी प्यालेस इटहरीमा हुने कार्यक्रम तय भएको छ । साधारण सभाले वित्तीय संस्थाको कार्यक्षेत्र बिस्तार गरी १० जिल्लाबाट १९ जिल्लामा पु-याइने प्रस्ताव पारित गर्नेछ । कार्यक्षेत्र प्रदेश नं. १ का झापा, इलाम, ताप्लेजुङ्ग, मोरङ्ग,संखुवासभा,ओखलढुङ्गा […]
डिम्याट गर्न सेयरधनीलाई एनआइसी एसियाको आग्रह
७ चैत, काठमाण्डौ । एनआइसी एसिया बैंकले सेयरधनीहरुलाई आफ्नो नाममा रहेको सेयर डिम्याट गर्न आग्रह गरेको छ । बैंकले भविष्यमा वितरण गरिने बोनसलगायत अन्य सेयरहरु डिम्याट खातामा जम्मा गर्नुपर्ने हुँदा त्यसको सहजताका लागि सेयरधनीहरुलाई यस्तो आग्रह गरेको हो । त्यस्तै, बैंकले हालसम्म पनि आफ्नो सेयर डिम्याट नगरेका सेयरधनीहरुलाई सम्पूर्ण भौतिक सेयर प्रमाणपत्रहरु खाता खोलेको सम्बन्धित निक्षेप […]
समाचार संकलन गरेर फर्कदै गरेका पत्रकार प्रहरी नियन्त्रणमा
कसरी पत्ता लगाउने नियमित सेक्स गर्ने र नगर्ने महिला..?
जानिराखौं, युवतीलाई पूर्ण सन्तुष्ट पार्न कति समयसम्म यौन सम्पर्क जारी राख्नुपर्छ ?
आँखाको रोग पालेर बस्न बाध्य